स्वस्थ रहन के खाने र के गर्ने ? - eNepal
स्वस्थ रहन के खाने र के गर्ने ?
by enepal २०७८, ९ जेष्ठ आईतवार 236
चितवन, जेठ-९। अहिले धेरैको ध्यान स्वास्थ्यमा नै केन्द्रित हुन्छ । बिहान उठेदेखि बेलुका सुतेसम्म के के गर्ने विस्तृत पढ्नुहोस् ।
दिनको सुरुवात बिहानीबाट भएजस्तै हाम्रो दैनिकी पनि बिहानबाटै सुरु हुन्छ । त्यसैले जति सक्यो सबेरै उठेर आफ्ना क्रियाकलाप सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ । चाँडो सुत्ने, चाँडो उठ्ने गर्नाले मान्छेलाई स्वस्थ, धनी, बुद्धिमानी बनाउँछ भन्ने उखानै पनि छ । बिहान चाँडो उठ्नेले ढिलो उठ्नेले भन्दा सहजरूपमा समयको व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्छ ।
व्यायाम, हिँडाइ वा योग सबै गर्न उपयुक्त समय पनि बिहान हो । बिहानको स्वच्छ हावाले शरीरलाई थप फाइदा दिन्छ । बिहानी नै दिनको सुरुवात भएकोले बिहानीपखमा जाँगरिलो हुने भएकाले यसलाई प्रिय र उत्पादनशील बनाउन जरुरी छ । बिहानको हिँडाइ तथा व्यायामले पूरै दिन ताजगी र उत्साहमय बन्छ भने खुशीमय बिहानीले पूरा दिन फलदायी बनाउँछ ।
Exercise आजकालको बढ्दो निष्क्रिय जीवनशैलीको कारण अस्वस्थता बढ्दै गइरहेको छ । रिमोट समातेर एकैठाउँ बसी टिभी हेर्ने सोख, लामो समयसम्म कम्प्युटर चलाउने बानी, अफिसमा टेबलको काम, बिहान–दिउँसो–बेलुका हिँडडुल शून्य, छोटो दूरीमा पनि सवारीको उपयोग आदिका कारण शारीरिक चलायामानको अभाव भइरहेको छ । त्यस्तै जड्ढ फुड, तयारी खाना, अधिक ऊर्जायुक्त खानाको उपयोग पनि बढिरहेको छ । यी सबैले गर्दा अस्वस्थ मानव जमात बढिरहेका छ । समाज नै अस्वस्थ बन्दै गइरहेको छ । यही कारण हो आजको बढ्दो मुटुको रोग । त्यसमा पनि कम उमेरमै चिनीको रोग तथा मोटापन वा सोसँग सम्बन्धित अन्य रोगहरूको सिकार हुनुपरिरहेको छ ।
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको समयको उचित व्यवस्थापन गरेर पूरै दिन स्वस्थ र सकारात्मकतामा बिताउन सक्नु हो । माथि उल्लिखित कुराहरूबाहेक दैनिक तथा नियमित अध्ययन गर्ने, समाजमा घटेका घटनाप्रति सुसूचित हुने, निश्चित समय आफ्नो रुचिअनुरूप टिभी हेर्ने, सड्डीत सुन्ने, समाचारहरू वा पत्रपत्रिकाहरू पढ्ने, रुचिअनुसारका पुस्तकहरूको अध्ययन गर्ने, समय, पैसा तथा बोली–विचारमा व्यावहारिकता अपनाउने, सामयिक निर्णय वा व्यवस्थापन गर्नेजस्ता अन्य स्वस्थ दैनिकीका उपायहरूसमेत अपनाएर जीवनशैली सुधार्न सकिन्छ । साधनाबाट